दैलेख कृषि कार्यालयका प्रमुखसहित १२ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा - Paschimnepal.com
दैलेख कृषि कार्यालयका प्रमुखसहित १२ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुखसहित १२ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सिड किट्स वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले कार्यलयका तत्कालिन प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा. नरहरि घिमिरेसहित १२ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सव इन्जिनियर शर्मा सिभिल निर्माण सेवाका सञ्चालकसमेत हुन् । अख्तियारले तत्कालिन कार्यालय प्रमुख डा. नरहरि घिमिरेसँग १० लाख ५० हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ विगो माग दावी गरेको छ ।
वागवानी विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगीसँग १८ लाख ३६ हजार ४०० र लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमालसँग १२ लाख ४६ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ । त्यस्तै ताजा तरकारी उत्पादन समूह दैलेखका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । स्राेत अनलाइन खवर
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १०, २०७५ 6:09:42 PM
Prevअग्नी पीडितकाे राहत लिएर न्याैपाने टाेल पुगे कर्णालीका मुख्यमन्त्री
Nextआफ्नो कार्यालय आफै, सफा